Ngathi - Study Abroad Nations
Study Abroad Nations Ibhlog yamanye amazwe ezinikele ekukhokeleni abafundi abafuna ukufundisisa phesheya okanye kwalapha kwiiyunivesithi ezilungileyo kunye neekholeji, kananjalo nokubenza ukuba bavezwe kumawaka kunye nethuba elinye lokufunda kunye neenkqubo ezithe saa kwi-intanethi.
Sithumela uhlaziyo lwemihla ngemihla kubo bonke ababhalisele ukubagcina benolwazi lwakutsha nje ngeenkqubo zokufunda ezivulekileyo ezikhoyo kunye nezikhokelo malunga nendlela abanokuthi bafake ngayo ezi nkxaso-mali ngezixhobo zonxibelelwano.
Sithumela iZikhokelo zokuFunda kwelinye ilizwe kubafundi bethu ukubakhokela ekuhambeni. Sikulungiselela kwaye usilungiselele ukuFunda kwelinye ilizwe nangaphambi kokuba ufumane ithuba ukuze uqaphele xa ithuba liza ekugqibeleni awuyi kubhideka malunga nendlela yokuhamba ngemicimbi.
Sinomfundi engqondweni, sicinga intlalontle yakho kuqala!